Nkọwa ihe omuma esi ewepụ data dị mkpa site na saịtị HTML
A na-ewere nnukwu ozi dị na net ahụ dị ka "arụghị arụ" n'ihi a hazieghị ya nke ọma. Ebe nrụọrụ weebụ HTML dị iche iche na ha nwere akwụkwọ a haziri ahazi, ederede ederede na akwụkwọ ahụ na-ahazi n'ime koodu HTML.
E nwere ụzọ isi ntinye data site na weebụsaịtị HTML:
Ịchekwa ederede dị na ibe weebụ na kọmputa gị;
Ide ederede maka nbudata data;
Iji ngwaọrụ mmepụta pụrụ iche;
1. Otu esi wepu HTML site na weebụsaịtị na-enweghị koodu
Ị nwere ike wepu ibe weebụ ọdịnaya site na iji usoro ndị a kọwara n'okpuru:
Nanị ederede naanị
Mgbe ị mepee webpage nwere ederede ịchọrọ, pịa nri ma họrọ "Save Page As," ma ọ bụ "Chekwaa". Pịnye aha maka faịlụ ahụ na "Aha Njikwa" na site na "Save As Type" menu dobe, họrọ "Web Page, HTML naanị. "Pịa bọtịnụ" Save "ma chere na sekọnd ole na ole - winbig21 no deposit bonus.
A na-ewepụta ihe niile edere na ibe ahụ ma chekwaa dị ka faịlụ HTML. Nhọrọ nhọrọ nhazi nke mbu na-anọgide na-emebi emebi, ma ị nwere ike idezi ọdịnaya n'ime ndị editọ ederede dịka Notepad.
Wepụ otu mkpokọta weebụ
Họrọ "Chekwa dị ka" ma ọ bụ "Chekwaa Page Dị ka" nhọrọ na menu "Njikwa". Mgbe ahụ, pịa "Weebụ Web, Complete" site na menu "Save dị ka Ụdị". Mgbe ịpịsịrị "Chekwa," a ga-esite na peeji nke a ma zọpụta ebe ọ bụla ịchọrọ. Edere ederede na faịlụ HTML ka echekwara ihe oyiyi na nchekwa.
2. Wepụ HTML site na weebụsaịtị site na iji koodu nzuzo
Ị nwere ike ịrụ ọrụ na faịlụ HTML site na iji ngwaọrụ pụrụ iche. Ọzọkwa, ị nwere ike ịmepụta koodu iji wepụ mkpado HTML niile ma debe ederede dị na HTML faịlụ site na iji XPath ma ọ bụ nkwupụta mgbe niile. Ụfọdụ n'ime asụsụ ndị a ma ama maka usoro ọrụ a gụnyere Python, Java, JS, Go, PHP na NodeJs.
3. N'iji ihe ntanetị nke data weebụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ faịlụ HTML site na ebe nrụọrụ weebụ na-edeghị otu koodu nke koodu ma ọ bụ na-ezere ịta ahụhụ nke mbipute na mpempe akwụkwọ, jiri ngwaọrụ scraping . N'eziokwu, e nwere ọtụtụ ngwá ọrụ na-enye aka nwere ike iwepụta ozi ndị dị mkpa site na weebụsaịtị ma weghachite ya n'ime usoro a haziri ahazi. Gbalịa jiri ngwá ọrụ mee ihe s, ị ga - ahụkwa ihe kachasị mma maka mkpa ịcha.